သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကို Facebook တွင်မည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း မိုဘိုင်းဖိုရမ်
သင်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက် Facebook avatar ကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း
အင်တာနက်ပေါ်မှ Avatars သည်လူကြိုက်များလာသည့် အချိန်မှစ၍ လက်တွေ့တည်ရှိခဲ့သည်။ အရင်တုန်းက avatar တစ်ခုဖန်တီးတဲ့အခါဂိမ်းတစ်ခု၊ ဂိမ်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်တခြားအကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကနေဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ပုံကိုသုံးရတယ်။ အမြဲတမ်းဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်ဆက်စပ်သော ဒါပေမယ့်သီးသန့်မဟုတ်ပါဘူး။
RAE အရ၊ avatar သည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အသုံးပြုသူ၏ virtual ဝိသေသလက္ခဏာကိုဂရပ်ဖစ်ကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဆော့ဖ်ဝဲလ်တီထွင်သူများမှာများပြားလှသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ avatars တွေဖန်တီးခွင့်ပေးပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်္ဂါရပ်များအရသိရသည်။ အက်ပဲလ်၊ ဆမ်ဆောင်းနှင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တို့သည်ဤဖြစ်နိုင်ခြေကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးစွမ်းနိုင်သည့်ကုမ္ပဏီသုံးခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။
ကိုယ်ပိုင်အင်္ဂါရပ်များဖန်တီးနိုင်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ဤလူမှုရေးကွန်ရက်များ၌ဤပုံရိပ်များကိုတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လူမှုကွန်ယက်တွေအကြောင်းပြောရင် Facebook အကြောင်းပြောရမယ်။ သင်သိလိုလျှင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ avatar တစ်ခုဖန်တီးနည်းအောက်မှာပြထားတဲ့အဆင့်တွေကိုလုပ်ရမယ်။
1 avatar တစ်ခုဖန်တီးရသည့်အကြောင်းရင်းများ
2 ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ avatar ကိုဖန်တီးပါ
3 ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook avatar ကိုပြင်ဆင်ပါ
4 မှတ်ချက်ပေးရန်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်ရှိ avatar ကိုအသုံးပြုနည်း
5 ပရိုဖိုင်းပုံအဖြစ် Facebook avatar ကိုသုံးပါ
6 WhatsApp, Telegram တွင် Facebook avatar ကိုသုံးပါ။
ရဲ့ရိုးသားကြပါစို့, ငါတို့ထဲမှအနည်းငယ်သည် Brad Pitt နှင့် Cindy Crawford တို့နှင့်တူသည် နှင့်အလွန်နည်းပါးအခါသမယအပေါ်ကျနော်တို့ဓာတ်ပုံများအတွက်ကောင်းသောအမှုကိုပြု။ သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းများ (သို့) လူမှုကွန်ယက်များတွင်မည်သည့်ဓာတ်ပုံကိုမဆိုအသုံးပြုရန်ငြီးငွေ့ပြီးသင်ကိုယ်တိုင်၏ပုံရိပ်တစ်ခု၊ ပုံဆွဲခြင်းတစ်ခုပင်ပြုလုပ်လိုလျှင်၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်မှန်၌မိမိကိုယ်ကိုမြင်သည့်အတိုင်းဖန်တီးသော avatar ကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။ တိုးတက်မှုအချို့ကိုကျင့်သုံးခြင်း ၀ က်ခြံများနှင့်အခြားအညစ်အကြေးများကိုမထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်ထားသည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ avatar ကိုဖန်တီးပါ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တွင် avatar တစ်ခုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟုတ်သည် (သို့) ဟုတ်ပါသည်အသုံးပြုရမည် ပြီးပြည့်စုံသော Facebook application ကို။ ဤဆောင်းပါးကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်အချိန်၌ Play စတိုး၌ရရှိနိုင်သည့် Facebook ၏ Lite ဗားရှင်းကကျွန်ုပ်တို့အားဤအခွင့်အရေးကိုပေးမထားပါ။
ကျနော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူစတင်။ Facebook application ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ငါတို့ဘယ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမလဲကိုသွားပြီးမှတ်ချက်ပေးမယ်။ စာသားလေးခု၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်မျက်နှာပုံသင်္ကေတကိုပြသသည်။ ကိုနှိပ်ပါ သင့်ရဲ့ avatar ကိုဖန်တီးပါ.
avatar တင်ဆက်မှုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်၊ ကိုနှိပ်ပါ အောက်ပါ.
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည် အသားအရေ။ သုံးစွဲသူများကိုတတ်နိုင်သမျှဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှအရေပြားတန်ချိန် ၃၀ အထိပေးနိုင်သည်။
နောက်ပြီး၊ ငါတို့ဆံပင်ရှိရင်ဆံပင်အရောင်နဲ့အတူတိုတယ်၊ အလယ်လတ်၊ ရှည်လျားတယ်။
အခုအလှည့်ရောက်ပြီ ငါတို့မျက်နှာကိုပုံဖော်အတူတူပင်၏အသားအရေနှင့်ငါတို့မျက်နှာ၏ထုတ်ဖော်လိုင်းများ / ဆိုင်းဘုတ်များ။
ကျနော်တို့ configure ရမယ်သောနောက်ရှုထောင့်ဖြစ်ကြသည် မျက်စိပုံသဏ္,ာန်, အရောင် ငါတို့မိတ်ကပ်တစ်မျိုးမျိုးလိုချင်မယ်ဆိုရင်။
မျက်စိ၏ပုံသဏ္andာန်နှင့်အရောင်ကိုပြုပြင်ပြီးနောက်၎င်းသည်အလှည့်ဖြစ်သည် မျက်ခုံးပုံသဏ္,ာန်, သူတို့ရဲ့အရောင်နှင့်ကျွန်တော်တစ် ဦး bindi ထည့်သွင်းလိုလျှင် (အိန္ဒိယတိုက်ငယ်နှင့်အရှေ့တောင်အာရှတွင်တွေ့ရသောနဖူး၏အလယ်ပိုင်းအပိုင်းကိုအလှဆင်ထားသောမြို့ပတ်ရထားအနီ)
La နှာခေါင်းပုံသဏ္.ာန် နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောဆင်ခြေလျှောအမျိုးအစား (အကယ်၍ ဖြစ်ခဲ့လျှင်) ကျွန်ုပ်တို့တည်ထောင်ရန်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
ပြီးရင်ငါတို့ပေးရမယ် ပါးစပ်မှပုံဖော် အကယ်၍ ၎င်းဖြစ်ပါက၊ အကယ်၍ တူညီသောနှုတ်ခမ်းနီကိုပုံမှန်အသုံးပြုပါကအရောင်တူသည်။
ကျွန်ုပ်တို့စတင်သည် မျက်နှာဆံပင်။ ဤအပိုင်းတွင်မည်သည့်မုတ်ဆိတ်၊ ဆိတ်သို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းမွှေးအမျိုးအစားကို၎င်းနှင့်၎င်း၏ပုံစံနှင့်အရောင်တို့ကိုရွေးရမည်။
Facebook avatar တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးပြင်ဆင်ရမည့်အဆင့်များအနက်တစ်ခုမှာမျက်နှာအသားအရေဖြစ်သည်။ အခုတော့အလှည့်ပါ ခန္ဓာကိုယ်အသားအရေ။
နောက်ပြီး၊ အဝတ်အစားအမျိုးအစား ငါတို့ဘာတွေသုံးတာလဲ ဤအပိုင်းတွင်နိုင်ငံအားလုံး၏ရိုးရာအ ၀ တ်အထည်များပါ ၀ င်သည်။
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ဆက်လက်၍၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သက်ဆိုင်ပါကတည်ထောင်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့ ဦး ထုပ်, ဗန်း, Kippa, beret, ဦး ထုပ်ကိုသုံးပါ... သက်ဆိုင်ရာအရောင်နှင့်အတူ။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ဆက်လက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ avatar ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်နောက်ဆုံးအပိုင်းကခွင့်ပြုသည် ပုတီးအမျိုးအစား ငါတို့သယ်တယ်။
လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးကျွန်ုပ်တို့သည်မှန်ဖြင့်ကိုယ်စားပြုသောအိုင်ကွန်ကိုနှိပ်နိုင်သည် ငါတို့မျက်နှာမျက်နှာပြင်ပေါ်ပေါ်လာသည်အမှု၌ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည် မေ့လျော့ ကျနော်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်လောက်၏။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အသင့်တော်ဆုံးအလွှာကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီလိမ့်မည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်မှန်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook avatar ကိုပြင်ဆင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ avatar ကိုဖန်တီးပြီးပါကဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသောစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုအားလုံးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရမည် ငါတို့လိုချင်တာနဲ့ကိုက်ညီတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့နောက်ထပ်ပြောင်းလဲမှုများမပြုလုပ်တော့မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်ပြီးလျှင်အဆင်သင့်ကိုနှိပ်ပါ။
ထိုအခါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ avatar ကိုဖြစ်လိမ့်မည် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်မက်စ်ဂျန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေခြင်း၏နည်းလမ်းသစ်, တူညီတဲ့ပလက်ဖောင်း၏စာတိုပေးပို့ရေး application ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် Avatar ကိုဖန်တီးပြီးပါက၎င်းကိုစတင်အသုံးပြုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ avatar ကိုထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ရွေးစရာမှကျွန်ုပ်တို့၎င်းကိုမကြိုက်ကြပါကပြန်လည်တည်းဖြတ်နိုင်သည်။
မှတ်ချက်ပေးရန်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်ရှိ avatar ကိုအသုံးပြုနည်း
ယခုမှစ။ မည်သည့်ထုတ်ဝေကိုမဆိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ avatar ကိုဝေမျှနိုင်လိမ့်မည် အကောက်ခွန် avatars စိတ်ခံစားမှုမဆိုကြင်နာဖော်ပြရန်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာသားအကွက်၏ညာဘက်ရှိ emoticon ပုံသင်္ကေတကိုနှိပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောကိုရွေးပါ။
ပရိုဖိုင်းပုံအဖြစ် Facebook avatar ကိုသုံးပါ
ဒီ function ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့နောက်ဆုံး option ကခွင့်ပြုပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဖိုင်းရုပ်ပုံအသစ်ကိုအစားထိုးအသစ်ဖြင့်အစားထိုးပါ ငါတို့ဖန်တီးခဲ့တာပါ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလိုပါက၎င်းသည်ရရှိနိုင်သောနေရာ ၆ ခုနှင့် avatar ၏နောက်ခံအရောင်ကိုမည်သည့်အနေအထားတွင်ပြုလုပ်ရန်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ပုံရိပ်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပွားပုံသဏ္newာန်အသစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ avatar အသစ်ကိုမည်မျှကြာကြာအသုံးပြုလိုသည်ကိုသတ်မှတ်ရမည်။
WhatsApp, Telegram တွင် Facebook avatar ကိုသုံးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ avatar ကိုဖန်တီးပြီး၎င်းကိုမျက်နှာပြင်အပြည့်တွင်ပြသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဖမ်းယူနိုင်ပြီး၎င်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည် မက်ဆေ့ခ်ျကို applications များထဲမှာသုံးပါငါတို့ဂျီမေး (သို့) Outlook အကောင့်မှာသုံးလေ့ရှိတယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » social networking » သင်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက် Facebook avatar ကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း
Android ဖိုင်များကို Mac သို့ပြောင်းနည်း